आज नेपालमा पनि रक्तदान दिवस मनाइँदै - China Radio International
आज नेपालमा पनि रक्तदान दिवस मनाइँदै
(GMT+08:00) 2019-06-14 15:20:48
आज शुक्रबार विश्व रक्तदाता दिवस मनाइँदैछ। सुरक्षित रगत सबैका लागि भन्ने नाराकासाथ यो वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाउन लागिएको हो। मानिसको रक्त समूह पत्ता लगाउने चिकित्सक कार्ल ल्याण्डस्टिनरको जन्मदिन पारेर सन् २००४ देखि हरेक वर्ष जुन १४ तारिखमा विरामीको ज्यान बचाउन सहयोग गर्ने रक्तदातालाई धन्यवाद दिन तथा सम्मान गर्न दिवस मनाउन थालिएको हो।
स्वस्थ्य मानिसले छ/छ महिनामा रक्तदान गर्दा राम्रो हुन्छ। केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाकी निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकार भन्नुहुन्छ, 'छ छ महिनामा रगत दिँदा केही फरक पर्दैन। अझ व्यक्ति स्वस्थ हुन्छ ।'
नेपाल स्वयमसेवी रक्तदाता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्यले जीवनमा १५८ पटक रगत दिइसक्नु भएको छ। रगतका लागि उहाँलाई दैनिक ३०÷३५ कलसम्म फोन आउने गर्दछ। यो फोन रगत अभाव भएरै आउने हो।
उहाँले १६ वर्षदेखि नै रक्तदान सुरु गर्नुभएको हो। हाल उहाँ ५५ वर्ष हुनुभयो। राजधानीमा भने माग अनुसार रक्तदाताको संख्या नबढेपछि बिरामीले सधै रगतको अभाव झेलिरहनुपरेको छ। केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक २५० युनिट रगतको आवश्यकता पर्छ। हाल केन्द्रमा दुईसय युनिट मात्र रगत सङ्कलन भइरहेको छ। केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक ५० युनिट रगत अभाव भइरहेको छ।
निर्देशक डा. राजकर्णिकारले रक्तसञ्चार केन्द्रले माग अनुसारको रगतलाई पूर्ति गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ७७ जिल्लाबाट १०५ केन्द्र मार्फत रगत वितरण हुँदै आएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।